UNokia noCarl Zeiss baxhawulana kwakhona emva kweminyaka | Iindaba zeGajethi
AbakwaNokia basweleke kudala kwaye bavukile kuthuthu lwalo kutshanje. Nangona mhlawumbi iindlela zetekhnoloji siyinika intshukumo engaphezulu kunaleyo inayo, kuba iNokia yangoku ayinanto ingako okanye ayinanto yakwenza nento eyayiyiyo ngaphambili, ngoku ikwiqela lotyalo-mali laseTshayina eligcine igama kunye nokunye. . Nangona kunjalo, ukuba bayayazi indlela yokwenza into kakuhle, kukubhenela kwi-nostalgia yabo iminyaka (ukusuka kwi-1998 ukuya kwi-2009 kwimeko yam) kuphela abaphethe iifowuni eziphathwayo zeempawu zabo.
Sele kuyiminyaka ngoku, uNokia ebesebenzisana noCarl Zeiss ebonelela ngeeselfowuni ezazingenalo ukhuphiswano ngelo xesha. Namhlanje iNokia iqinisekisile ukuba iyasebenza noZeiss ukubonelela abasebenzisi ngeziphumo ezisemgangathweniNgaba oku kuya kuyonyusa intengiso yeNokia?
Asazi nto kwaphela malunga nentengiso yeNokia yangoku (elawulwa yi-HMD Global), enyanisweni ukunyaniseka andikaboni nto ingaphaya kwetekhnoloji yetekhnoloji yomzuzu okanye yeziganeko. Nangona kunjalo, basebenza nzima ukuphinda baphinde baphathe uphawu, ukuqala nge isivumelwano kunye noXiaomi ukunyusa iprosesa zabo kwaye siphela ngoku ngesivumelwano esitsha noZeiss, umntu omdala endandiqhelene naye owayekade eyiFinnish.
Ukunyaniseka, akukho nto ingako siyaziyo malunga noluvo lutsha, nangona kunjalo iqela le Iyavela ukhawulezile ukuvuza ividiyo yesixhobo esingakhange sivezwe yiNokia apho kubonwa khona iisenzi ezimbini zekhamera (ikhamera emibini inefashoni kakhulu), Kubonakala ngathi le iya kuba yiNokia entsha eya kuthi inyuse iikhamera ngobuchwephesha beCarl Zeiss, nangona amagama abhaliweyo angenza izingqinisiso kubo angabonwa nakweyiphi na kuzo. Kucacile ukuba le nto ikhutshwa yiNokia yangoku luluhlu lwezixhobo eziphantsi neziphakathi ngexabiso lokukhuphisana, kwaye bayazi kakuhle ukuba uphawu lweNokia lunokubanceda kwintengiso eYurophu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » UNokia noCarl Zeiss baxhawulana kwakhona emva kweminyaka
Eyona Nokia imbi embalini enye esefotweni ... i-N8 ifikelele kwintengiso ... Iselfowuni ecothayo ... Ngeengxaki zesoftware ... Ekuphela kwento elungileyo ngesixhobo ... Ikhamera ye-12 mpx .. .
Ibhetri enkulu kunazo zonke iya kuvela eTesla kwaye iya kuba se-Australia